Inona no hatao aorian'ny fametrahana Slackware 14 | Avy amin'ny Linux
DMoZ | | Fisehoana / personalization, GNU / Linux, soso-kevitra, Tambajotra / seriver, Tutorials / Manuals / Tips
Vantany vao vitantsika ny Fametrahana slackware 14, ilaina ny fanitsiana madinidinika.
1 1. Manampia mpampiasa vaovao
2 2. Manova ny fitenin'ny rafitra
3 3. Vaovao farany ny rafitra
4 4. Configure boot
5 5. Ataovy milamina ny LILO
1. Manampia mpampiasa vaovao
Ampirisihina hatrany ao anatin'ny tontolon'ny Linux, NO ampiasao ny kaontin'ny faka hiasa, noho izany dia tsy maintsy mamorona mpampiasa hafa isika ho an'ity tanjona ity ary izany dia tratra amin'ny alàlan'ny baiko adduser.
Ilaina ny manampy ny mpampiasa vao noforonina ho amin'ireo vondrona isan-karazany
izay mety: feo, lp, optika, fitehirizana, horonan-tsary, kodiarana, lalao, herinaratra, scanner.
Ilaina ihany koa ny fananan'ny mpampiasa vao noforoninay tombontsoa faka, tratra izany amin'ny fanovana ny rakitra akanjo ba, raha ny amiko dia hampiasa aho vim.
na azontsika atao amin'ny fomba "azo antoka kokoa" izany
Izahay dia mitady ary tsy mahazo aina isika ny tsipika (esorinay ny toetra #
Raha vantany vao vita izany dia afaka manohy ny fizotrany amin'ny alàlan'ny mpampiasa antsika isika, noho izany dia manidy ny fivoriana isika faka
ary miditra amin'ny mpampiasa anay izahay.
2. Manova ny fitenin'ny rafitra
Raha nanapa-kevitra ny hampiasa KDE, afaka avy any rafitra rafitra ovay ny fomba fitenin'ny fiteny sy ny fitendry, fa tsy misy fiantraikany amin'ny fampiharana an'io tontolo birao io ihany.
Mba hanovana ny rafitry ny rafitra amin'ny ankapobeny dia tsy maintsy aondrana ireo fanovana ny tontolo iainana, tontosa izany fanovana ny rakitra lang.sh
Mikaroka sy manome hevitra ny tsipika izahay (manampy ny toetra # amin'ny voalohany)
avy eo izahay manampy
Afaka miova ianao es_MX.utf8 amin'ny fitenin'ny firenenao.
Mba hahazoana iray lisitry ny fiteny feno karazana tohana ao amin'ny console anao
Raha mampiasa akorandriaka ankoatry ny bash (na mikasa hampiasa azy) ianao dia mila manitsy ny fisie ihany koa lang.csh
Mikaroka sy manome hevitra momba an'io tsipika io izahay
3. Vaovao farany ny rafitra
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny misafidy ny trano fitahirizana hampiasainay, indrindra ireo akaiky ny toerana misy anay, noho izany dia manova ny rakitra izahay fitaratra manelingelina ny andalana izay heverinay fa mety.
Azontsika atao ny manamarika fa misy mpizara ny sampana amin'izao fotoana izao misy fonosana vaovao kokoa
Inona no tsara kokoa, kinova miorina na ankehitriny?
Ao amin'ny Slackware dia tsy dia tsotra ny fanapahan-kevitra, tsy eo anelanelan'ny fanapahana hevitra eo amin'ny Debian Squeeze sy Wheezy. Ny kinova milamina dia voadilana tokoa saingy tsy nasiana patsa afa-tsy ny olana ara-piarovana tena be, ny sampana amin'izao fotoana izao mahazo fanavaozana matetika kokoa izay manatsara ny filaminana nefa miharatsy ny fitoniana amin'ny lafiny iray, na izany aza, misy fotoana vitsy izay miteraka olana tena izy io.
Mandritra io dingana io dia hampiasainay slackpkg, mila miditra ho mpampiasa ianao faka.
a) Hanavao ny lisitry ny fonosana:
b) Mametraka ny lakilen'ny sonia nohavaozina izay manome antoka fa ara-dalàna ireo fonosana napetraka. (Vita tamin'ny voalohany ihany)
Hanome antsika izany vokatr'izany
c) Hanavao ireo fonosana napetraka rehetra
d) Apetraho ireo fonosana vaovao (raha nanapa-kevitra ny hampiasa ny sampana ankehitriny ianao dia hanampy ireo fonosana vaovao amin'ity kinova ity)
4. Configure boot
Heveriko fa ny ankamaroan'ny mpampiasa izay nametraka an'ity fizarana ity dia ho diso hevitra rehefa mahita fa tsy miditra mivantana ny tontolon'ny sary fa ilaina ny manomboka mampiasa startx.
Izany dia satria Slackware amin'ny toerana misy anao dia manomboka amin'ny runlevel: 3Amin'ny lafiny iray dia mila manomboka ity fizarana ity runlevel: 4 Raha te hiditra amin'ny maody sary ho azy, dia mila izany isika Ovay ny rakitra inittab
5. Ataovy milamina ny LILO
By default lilo Ny ora fiandrasana dia apetraka amin'ny 2:00 minitra (1200 ampahafolon'ny iray segondra), izay mety somary manelingelina, azonao atao ny manindry lakile iray hanelingelenana ny isa ary hitohy amin'ny enta-mavesatry ny rafitra, fa raha ianao Mahaliana hanovana io fotoana fiandrasana io ao amin'ny lilo mila manitsy ny rakitra fikirakiranao ianao, tsy maintsy ataontsika tahaka izany faka
Ka ny efijery an'ny lilo Tsy ho hita mandritra ny 5 segondra (ny fotoana dia tsy maintsy faritana amin'ny ampahafolon'ny segondra, azonao ampiasaina ny vola toa mety).
Vita io dia tsy maintsy ataontsika
Ilaina izany hanoratana ny MBR.
Hatreto dia izay heveriko fa tokony hatao raha vao nametraka Slackware isika, amin'ny fizarana manaraka dia hiresaka momba ny fikirakirana fonosana amin'ity fizarana ity aho.
Te-hanolotra fisaorana manokana aho krel [ksuserack [at] gmail [dot] com] izay tsara fanahy nanome ahy lahatsoratra feno momba ny mpanoratra, izay niaingan'ity ampahany ity sy ireto lahatsoratra manaraka ireto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Inona no hatao aorian'ny fametrahana Slackware 14
Azo antoka fa ny vondrom-piarahamonina iray manontolo dia tokony hankasitraka ny fanamafisana ny teboka voalohany izay mamporisika ny TSY hampiasa ilay rafitra ho faka. Indrindra ho an'ny mpampiasa vaovao izay maniry ny hanafoana ny fampiasana ny tenimiafinao ho an'ny asa rehetra ary hampiasa ny rafitra manana tombony be loatra.
Eny, fahadisoana be dia be ataontsika izany rehefa manomboka eo amin'ny tontolon'ny Linux isika, fomba fanao ratsy tohanan'ny Microsoft ...
Raha ny marina dia misy ny fironana hanova ny sudoer amin'ny fomba ratsy manome ny tombontsoa rehetra ho an'ny mpampiasa ny endrika
USER REHETRA = (REHETRA) REHETRA
Na ratsy kokoa, manampy NOPASSWD
Fa na izany aza, fanao izy ireo amin'ny alàlan'ny endrika idirantsika, soa ihany isika fa miala ...
[YaoMing] Raha windowsers ianao ary te hijanona arakaraka ny admin, mamporisika anao aho hanomboka amin'ny Windows Vista, avy eo Debian ary avy eo Slackware [/ YaoMing].
Raha ianao, toa ahy, dia tsy raharahianao ny effets amin'ny birao ao amin'ny kde.
Tsy milamina araka ny lanjany izy ireo.
-http: //parduslife.wordpress.com/2011/02/17/how-acelerar-el-en environment-de-descritorio-plasma-de-la-kde-sc/
-http: //parduslife.wordpress.com/2012/04/03/how-acelerar-el-en environment-de-descritorio-plasma-de-la-kde-sc-parte-2/
malaina toa mahaliana be aho nefa manana fisalasalana kely:
raha te hanavao dia ilaina ny miditra ho faka?
Ka tsy afaka manavao amin'ny sudo aho?
Ohatrinona ny ram amin'ny rafitra vao napetraka?
mety amin'ny netbook mini hp misy ram 1Gb ve izy?
(ary malaina ho hany OS)
Raha misafidy ny amin'izao fotoana izao aho, dia hiharatsy hatrany ireo olan'ny fitoniana rehefa mandeha ny fotoana, arakaraka ny fanavaozako hatrany hatrany?
Lilo fotsiny no azoko ampiasaina ary tsy misy grub?
Hahahaha, saika nahavita nanapo ny lohako ianao xD ...
Raha ny fahitana azy dia tsy ilaina ny miditra ao anaty faka na dia hatreto aza ny fomba fanaovako azy, mila mandinika an'io aho, mpampiasa vaoavao ny Slackware aho = P ... Fa matokia fa hanadihady azy aho mandra-pahazoako antoka tanteraka ary ho avy handao ny fahatsapako eto aho ...
Ohatrinona RAM? Tsy mbola manana hevitra aho ... Mihevitra aho fa tokony handeha tsara ao amin'io netbook io ...
Raha misafidy ny amin'izao fotoana izao ianao (izay tena marin-toerana ihany koa) dia heveriko fa tsy hanana olana lehibe ianao satria ireo fonosana ireo, araka ny nolazaiko, dia nopetahana matetika mba hisorohana izany karazana toe-javatra izany ...
Tsy afaka namaly ny fanontanianao farany tamim-pahatokiana aho, saingy heveriko fa tsy tokony ho olana ny fandisoana ny fametrahana LILO ary avy eo misafidy GRUB ...
hahahahaha azafady, rehefa mahita zava-baovao ve aho dia manery ahy hanontany ireo karazan-javatra ireo ny fahalalako hahafanta-javatra, izany dia toy ny fizotry ny lojika zavatra hafahafa sy mamporisika an'i Oo
Tsara fanahy be ianao namaly ny fanontaniako xDDD
Slackware dia fizarana mpandala ny nentin-drazana noho izany:
Matetika kokoa ny miditra ho faka noho ny mihazakazaka sudo, na dia mieritreritra aza aho fa raha azo atao dia tsy mampiasa sudo manokana aho.
Mihazakazaka serivisy marobe toa ny mpizara izany ka tsy maintsy ajanonao ny zavatra tsy ilainao amin'ny netbook-nao, izay tsara raha mila mamaky kely ianao. Mety misy safidy tsara kokoa noho ny Slackware ho an'ny netbook tadiavinao.
Lilo no ampiasaina fa efa nahita tutorial hampiasa grub.
Raha mampiasa KDE ianao dia handany ondrilahy manodidina ny 300 mb (amin'ny laptop-ko) fa azo ovaina daholo ny fampiasana kely kokoa (na mihoatra lol).
Raha mpampiasa Slackware vaovao ianao dia mamporisika anao aho hanadino ny momba an'izao fotoana izao, afaka kelikely io.
kde, ahafahantsika manamboatra ny birao raha toa ka kahie izany.
fiasa amin'ny sehatry ny sehatry ny asa >>> workspace >>> karazana workspace >>> miova avy amin'ny birao mankany amin'ny kahie sy voila, mampihatra sy manangona izahay Miarahaba.
Vao avy namaky ity voalaza etsy ambony ity aho, manandrana fotsiny amin'ny vm, fa mampanantena. Ilay "distro original" hehehe. Misaotra anao. Raha ny filazan'izy ireo dia ny trosa no ampanantenaina.
Oo saika mampahatsiahy ahy ilay boky torolalana gespadas hametrahana andohalambo lol angamba tsy hitovy ny distro rehetra ^ _ ^ ... MIARAKA SOA MBA TSARA
Hehehe, io lazaiko io ihany, momba ny mpampiasa sy ny fiteny XD.
Lahatsoratra tena tsara, arahaba soa, na ny torolàlana fametrahana na ity iray ity dia samy feno tanteraka. Raha ny marina, ny torolàlana fametrahana dia ilay feno indrindra hitako, maro no mandingana ny dingana sasany toy ny fizarazarana ny kapila mafy izay heveriko fa tena zava-dehibe. Miaraka amin'izany, ireo mpampiasa distro hafa dia azo antoka fa resy lahatra fa ny Slackware dia tsy dia sarotra apetraka, na dia tsy fametrahana fotsiny aza dia mila manamboatra ny rafitra kely araka izay itiavantsika azy isika.
Soso-kevitra vitsivitsy monja avy amin'ny HEVITRA TAMIN'ILAY TENY: Tandremo ny amin'ny ankehitriny, manoro hevitra mafy aho ny amin'ny tsy hampiasana arus raha tsy hoe fantatrao tsara izay ataonao. Ny fonosana ankehitriny ??? ny ankamaroany dia tsy fonosana ampiasaina isan'andro na tontolon'ny famokarana, natao ho fanandramana ary saika azo antoka fa tsy milamina ny rafitra. Saingy ohatra raha te hahazo ny kinova firefox farany ianao amin'izao fotoana izao dia tsy dia misy olana firy, na izany aza, raha ny kernel na ny singa / rafitra fitehirizam-boky manan-danja dia ao anatin'ny ssssss ankehitriny, ohatra, ny fanavaozana glibc dia hiteraka olana amin'ny tsy fitoviana amin'ny rindranasa ary hanao izany izahay mila mamerina azy rehetra. Tsy mety ihany koa ny manavao ny kernel miasa amin'ny slackpkg satria fotsiny, tsy maintsy ataontsika anaty lisitra mainty (Raha tsy miteraka olana amin'ny ekipantsika izany, maninona no ovay?). Raha tokony ho izy dia fikarakarana miaraka amin'ny fanavaozana azy rehetra, manoro hevitra aho ny hitady izay mahaliana antsika, ohatra ny firefox, ao amin'ny changelog of slackware.com ary avy eo tsy manao fanavaozana firefox hafa.
Azo esorina ny efijery lilo (ohatra, raha tsy manana Slackware fotsiny isika fa tsy misy zavatra napetraka hafa) amin'ny fanomezana valin-teny ireo tsipika fanentanana sy famantaranandro.
Mihobia ary faly aho mahita bebe kokoa amin'ny Slackware amin'ity habaka ity.
Misaotra noho ny fanamarihana nataonao, azafady avy amin'ny veterana Slack foana izy ireo, mbola tsy manana traikefa betsaka amin'ity fizarana ity aho fa miasa izany =) ...
Misaotra betsaka, izao dia miroso amin'ny fametrahana Slackware amin'ny VirtualBox aho.
Mba hamoronana kaonty mpampiasa amin'ny slackware ary tsy hampidi-doza ny rafitray dia manao izao manaraka izao izahay. Amin'ny maha "faka" antsika, ampio aloha ny vondrona iray izay ananan'ilay kaonty tianay hamoronana, ary ny dingana manaraka dia hampiasainay i Kuser hanome azy ireo tombontsoa tadiavinay. Izahay dia manoratra ao amin'ny terminal:
groupadd [anaran'ny vondrona]
Vantany vao noforonina ilay vondrona, ampidininay ity toro-lalana ity, amin'ny teny anglisy, saingy io no niasa tamiko.
Slackware dia mitondra script hamoronana mpampiasa "useradd" no anarany (adduser no baiko ananan'ny distros rehetra ary ny useradd dia ny script Slackware)
tutorial tena tsara
Amin'ny slackware dia tsy tian'ny okular ny famahana ny endritsoratra, ka nanandrana nametraka ny fonosana adobe-reader (RPM) aho aloha, ary nanova azy io ho rakitra azo tanterahina ho an'ny "slack". Toy ny ao amin'ny Fedora dia havaozina ny kinova anglisy, ny vokatra dia ratsy, noho izany dia nanapa-kevitra ny hametraka ny mimari-droa mpamaky adobe aho, ny vokatra dia tsara. Raha liana amin'ny fametrahana azy ianao dia manaraka ity toro-lalana ity. arahabaina
Raha hametraka macromedia flash player dia vakiantsika aloha ny fampitandremana ao amin'ny faritra FLASH.
Avy eo ny torolàlana ho an'ny 32 sy 64 bit.
Ny fametrahana Flash dia tsotra kokoa amin'ny alàlan'ny Slackbuilds, manomana lahatsoratra roa aho, ao anatin'izany ny fomba fampiasana Slackbuilds, raha vantany vao manana fotoana bebe kokoa aho dia halefako any aminao izy ireo ...
andlinux dia hoy izy:
compa fandraisana anjara tena tsara; eros dia nametraka slack 14 64 bits fotsiny aho .. saingy maharary ahy ny miala malaina 12.2 .. rehefa avy nividy solosaina finday vaovao indrisy fa tsy manohana ny malaina 12.2 .. ary nanapa-kevitra ny hametraka slack14 64bist aho ...
tsara androany, rahalahy somary sahirana aho .. avy eo dia hanisa ny sisa miarahaba slackeros
Mamaly an'i andlinux
Aza adino ny mametraka fanontaniana ao amin'ny forum, na dia mety eto koa ...
Manana izany fanamarihana izany aho. Ity vatosoa fanapariahana izay Slackware ity dia miasa tanteraka, adidiko aminao izany. Misaotra anao
Faly aho fa manompo =) ...
Miasa tanteraka, nametraka Slackware fotsiny tamin'ny solosainako manokana aho ary ambonin'izany rehetra izany tsy misy VM.
Mandeha amin'ny dingana amin'ity lohahevitra ity izahay izao!
PS: Mampiasa XFCE aho, ny hany zavatra tsy hitako tamin'ny resaka Panel ambony dia ny fampandrenesana ireo tambajotra WIFI ka izao aho dia eo amin'ny internet amin'ny fomba tariby. : S
misy dia hoy izy:
Aorian'ny fametrahana azy dia tsy maintsy esorinao io fa tsy ampiasaina. DEBIANO LEHIBE SY NATAON'NY FAR
Mamaly ny sasany
avy amin'ny hevitrao, mino aho fa vaovao amin'ny gnu / linux ianao. Mampahatsiahy ahy ireo mpampiasa windows io rehefa nomarinao hoe linux.
kingler7345 dia hoy izy:
Ampidiro amin'ny milina virtoaly ny XFCE ary apetaho ny fametrahana ny safidy mba tsy hametrahana ny tontolon'ny KDE, fa aorian'ny fanarahana ireo dingana ireo dia mametraka rindranasa KDE maromaro aho .. azo ialana ve izany? Ary koa, ahoana no hametrahako ny mpamily Nvidia ho an'ny Geforce 8600? mahafinaritra ny fampianarana 😀
Mamaly an'i kingler7345
Misaotra ny mpitaiza, te hanandrana an'ity distro ity aho ary mila zavatra toy izany 😉
Kami dia hoy izy:
Mamaly an'i Kami
Pixel dia hoy izy:
Salama tsara, voalohany indrindra dia misaotra betsaka tamin'ny fampianarana,
Te-haneho hevitra aho fa somary vaovao izy ireo amin'ity tontolon'ny Linux ity, ary te-hanohy hianatra.
Manondro manokana ny teboka No. 2 hanova ny fiteny ho Espaniôla, nataoko izay voasoratra ao amiko amin'ny zava-drehetra fa tsy mametraka MX napetrako GT, namerina ny milina Virtual aho ary tsy misy na inona na inona, mbola manaraka ny teny anglisy ny OS, azonao lazaina ve ahy fa mety hahatonga ahy tsy hahita aho.
Tsara ny manamarika fa tsy nanitsy ireo antontan-taratasy voalaza avy amin'ny console aho, fa avy amin'ny tonian-dahatsoratra izay azo sokafana ao anaty Slackware ireo rakitra.
Misaotra amin'ny fanohanan, arahaba.
Mamaly an'i Pixel
Izao dia mila manova ny fiteny amin'ny KDE fotsiny ianao, manao izany amin'ny System Prefers.
Misaotra ny valinteninao, azoko lazaina aminao fa efa nahatanteraka an'io fomba fiasa io aho, nanova ny fiteny tao amin'ny System Prefers fa taorian'ny nanombohana dia mbola amin'ny teny anglisy ihany.
Angamba misy tsy mety, fa efa nojereko ary narahiko indray ny dingana mankany amin'ilay taratasy ary tsy mandeha izy.
Manoro hevitra anao aho handefa ny olanao amin'ny fomba feno kokoa ao amin'ny forum (http://foro.desdelinux.net/viewforum.php?id=4), amin'izay izahay afaka manampy anao hahita vahaolana ...
tena tsara, izaho dia avy amin'ny kamo mba hanandrana azy
Tena tsara fa mila amboarinao ny feo (alsa na tsindrio tsy haiko hoe iza no hapetraka amin'ny alàlan'ny default)
Ianao koa dia mila manondro ny fomba fametrahana sasany startup splash (rafitra) plymouth na fbsplash na splashy nefa tsy mila mametaka ny kernel (tsy te-hiditra ao amin'ny vavonin'ny amboadia fotsiny aho)
Manana ny mpamily hercules Mk2 ao amin'ny tar.gz aho fa ao anatin'io fisie io no misy ny mpamily RPM sy ny hdjcpl koa. Azo ovaina ho endrika Slackware io? Mety ve izany?
Ny fiankinan-doha dia tsy olana lehibe (heveriko) dkms, lohan-kernel ary kely sisa dia tadidiko fa tadidiko
Slackware izany: KISS
Tsy ubuntu izany.
Hadinonao ny antsipiriany maromaro, ohatra
Bootsplash avy amin'ny baotin'ny rafitra
Fametrahana mpamily ankolafy toa ny hercules console DJ Mk2 (miaraka amin'ny endrika .deb sy .Rpm izy ireo ary tsy misy intsony)
Fametrahana gnome sy appmenu-tondro raha te hanana ireo menus amin'ny fomban'ny Unity
Ampifanaraho ny script fampiatoana / hibernate hamonoana ary hamerenana indray ireo daemon sasany hahomby tsara (ohatra jackd, pulseaudio sns)
Mametraha fonosana avy amin'ny antoko fahatelo toy ny amin'ny debian / arch
Lahatsoratra tsara! misy fomba fitehirizana azy sa zavatra hafa toa izany?
Vaovao aho, misaotra !!
Notazomiko ny fampanantenanao hametraka PDF ho anao, hiandry aho hamita ny fanoratana ary miaraka amin'ny fampahalalana fa manao izay hahasoa antsika i Eliot afaka mamela boky tsara ho anao.
Aza manahy momba izany, satria mandritra ireo andro sisa tavela ireo dia ho vitako ny manoratra ny lahatsoratro momba ny Slackware 14 sy ny plugins mpanampy sasany toy ny manager package package slapt-get ary ny seranam-piaramanidina Alien sy Slacky.eu ka tsy mila aho miankina amin'ny lozabe.
Misaotra betsaka anao mamaly, ny marina dia nanohy namaky azy io indray aho, satria raha tsy izany dia tsy fantatro akory fa namaly ahy ianao, antenaiko hihazona ny tanan'ity bilaogy ity
bawanglabaiko dia hoy izy:
Vao nandao an'i Ubuntu aho (halako ny Unity ary ho faty i Gnome ...) ary ny Slackware taloha dia fahagagana lehibe sy mahafinaritra (na dia hitako tamin'ny alàlan'ny Wifislax aza fa tsy distro tsara izy io fa andiana fitaovana manokana raha ny tokony ho izy. ..) Saingy, miasa amin'ny S ...
Ny hany tokana mampifandray ahy amin'i W $$$ dia Photoshop, tsy tonga i Gimp na dia fitaovana mahafinaritra aza.
Mandeha amin'ny Slackware eo ambanin'ny WINE i PS amin'ny fomba azo ekena ... mandra-pampiasa ilay fitaovana TEXT dia mikatona tsy am-pihambahambana. Nahita an'io olana io tamin'ny Ubuntu ihany aho, ary asehon'izy ireo fa ny olana dia satria manana SOURCES be loatra isika napetraka ????
Ary aiza izany? Amin'ny fizarako ho an'ny W7? Mazava ho azy fa raha miditra any W ny WINE hitady loharano dia satria ilaintsika ireo napetraka ao dia tsy ampy amin'ny roa amin'izy ireo ...
Tsy haiko raha hanana valiny na hafetsen'ny almendruco ianao; fa ny fifamatorana lehibe indrindra amin'ny W $$$ dia ny joío PS (Amin'ny tranga tsy azo ifampiraharahana, tsara ny GIMP, saingy tsy afaka manomboka indray aho afaka 7 taona nijanonana tao potochop….)
Na izany na tsy izany, fantatrao ve ny fomba fametrahana endritsoratra vaovao amin'ny Slackware izay misy fiatraikany amin'ny GIMP, LibreOffice sns? Fantatrao ve fa misy mpijery tff ho an'ny Slackware toy ny FONT MANAGER na mitovy aminy? Mila mametraka tsirairay ve ianao? Ary ahoana?
Na izany na tsy izany ... Fantatrao ve ny momba an'io? Amin'ny teny anglisy hafahafa vahiny rehetra any ...
Mutxas zenkius amin'ny asanao sy ny tombontsoanao. XD
Mamaly an'i ajolabaiko
Frerly dia hoy izy:
Fidirana tena tsara, nandinika ny fidiran'ny Slackware tao anaty bilaogy aho, misy bebe kokoa ny fampahalalana noho ny tamin'ny nanombohako 6 taona lasa uu, mba hanomezana zavatra bebe kokoa fotsiny.
Slackware dia manome lanja lehibe ny filaminana ka na ny sampana miorina, ny ankehitriny ary ny sampana teo aloha dia manome lanja betsaka ny fiarovana amin'ny alàlan'ny kinova Slackware taloha dia azo antoka tokoa satria voaray hatramin'ny ela ny fanavaozana, koa ho an'ny filaminana dia tsy mila miahiahy isika .
Slackware dia manana script tena tsara toa ny adduser ao amin'ny fizarana fahatelo amin'ity script ity fotsiny rehefa manome anao fampitandremana, tsindrio ny bokotra miakatra, ary amin'ny alàlan'ny majika dia miseho ho an'ireo mpampiasa birao mahazatra ireo vondrona, raha mila vondrona maro ianao dia ampianao eo ihany.
Misy ihany koa xorgsetup ho an'ny tontolon'ny sary, Mamorona fonosana jdk sy jre izay nesorina noho ny olana ara-dalàna, Mametraha birao Office tsy mitovy amin'i Koffice.
Mamaly an'i Frerly
D_Jaime dia hoy izy:
Bilaogy tena tsara !!!!!!!!
Te-hiarahaba anao fotsiny aho …………………………………………………………….
Valio amin'i D_Jaime
Ny hizaha raha misy afaka manome vaovao amiko hametrahana slackware 14.2
Inona avy ireo fonosana kely indrindra hanombohana an'ity.
ary koa inona ny fonosana ilaina mba hiarahan'ny tambajotra amin'ny ping na traceroute.
Slackware dia fizarana iray feno izay tokony hatao foana ny mametraka azy tanteraka. Raha tsy hoe voafetra be ny toerana misy anao ao anaty kapila, ka eo am-piandohan'ny fametrahana dia afaka misafidy ireo fonosana hapetraka ianao amin'ny alàlan'ny famafana ireo izay tsy mahaliana anao.
Raha tianao linux minimalist kokoa dia safidio ny archlinux izay manome anao ny zava-drehetra amin'ny dropper.
Pedro Herrero dia hoy izy:
Vao nametraka Slackware 14.2-current aho ary samy nanao ny fametrahana sy ny fikirakirana manaraka miaraka amin'ny fanampian'ity lesona ity.
Androany dia mbola manan-kery izy io, ary tena manampy
Valiny tamin'i Pedro Herrero
Fakan-tsary vaovao Nikon D5200 - endri-javatra